Tsy misy ahiahy! Semalt Expert Mahalala ny fomba fananganana Filtres amin'ny Google Analytics
Ny Google Analytics dia tompon'andraikitra amin'ny fanangonana ny vaovao sy ny angon-drakitra momba ny fitsidihana rehetra natao tao amin'ilay tranonkala. Mba hahazoana fahatakarana mazava momba ny fampisehoana ao amin'ny tranonkala, mety mila mijery ny angona avy amin'ny tatitra avy amin'ny Google Analytics ianao. Manampy amin'ny fananganana fanapahan-kevitra hanatsara na hanovana singa sasantsasany ho an'ny fanatsarana ny fampivoarana.
Ny iray amin'ireo fomba ahafahan'ny tompona tranokala jerena momba ny singa tsirairay momba ny mpitsidika azy dia amin'ny alalan'ny filtriera.
Oliver King, iray amin'ireo manam-pahaizana za-draharaha matihanina avy amin'ny Semalt , manazava ny fomba hampiasana ny sivana Google Analytics hanesorana ny fifamoivoizana ao amin'ny tatitra ao amin'ny tranokala.
Alohan'ny fanapahan-kevitra hamorona ny sivana Google Analytic mba hanesorana ny fifamoivoizana amin'ny orinasa avy amin'ireo tatitra, dia zava-dehibe ny hahatakaranao ny antony hanaovana izany - custom wall unit designs. Ny Google Analytics dia mirakitra ny fitsidihana rehetra ao amin'ny tranokala, na ireo avy ao anatin'ny orinasa. Amin'ny fampielezan-kevitry ny dokambarotra ho an'ny tranonkala, ny mpangalatra dia mety handany fotoana betsaka ao amin'ny tranokala. Mety hitady lahatsoratra manan-danja izy ireo hizarana amin'ny mpanjifany, na hamerina hijery ny votoatin'ny tranonkala.
Mampalahelo fa mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny fanatanterahana ireo tanjona ireo. Rehefa nandrakitra an'ireny fitsidihana ireny ny Google Analytics, dia nanakorontana ny angon-drakitra napetrak'izy ireo izahay mba hamaritana ny fomba nandraisan'ny olona ny toerana sy ny zavatra nataon'izy ireo fony izy ireo tany. Ny fifamoivoizana anatiny dia mety hanondro ireo antontan-kevitra diso izay mampitombo ny ezaka hahatakarana ny fihetsik'ireo mpitsidika "mahazatra"..Ny vokatra dia manatsara ny fomba fitantanana ny tranonkala amin'ny alalan'ny fampahafantarana ny tatitra tsy misy dikany. Na izany aza dia misy fomba iray manodidina ity olana ity amin'ny alalan'ny fampiasana ny sivana amin'ny Google Analytics rehefa manadio ny asa ataonay ao amin'ny tranokala avy amin'ny tatitra.
Sokafy Google Analytics ary midira ao amin'ny kaontinao.
Mandehana mankany amin'ny sehatry ny Admin ary manamboara fomba fijery vaovao. Ataovy azo antoka fa avelao ny iray amin'izy ireo tsy miova miaraka amin'ny angon-drakitra. Miasa toy ny backup izy io. Mamoròna iray vaovao ho an'ny adiresy IP voasivana. Miomàna miaraka amin'ny anarana manoritsoritra ny fomba fijery vaovao ary ataovy azo antoka fa manana ny fotoana mety ianao.
Fidio amin'ny sehatra vaovao ny tabilao miaraka amin'ny "Create a Filter".
Ampio ny sivana tianao hampiasaina. Raha toa ka tsy miseho eo amin'io sehatra io ny bokotra, dia mety mila mangataka fahazoan-dàlana ambony indrindra amin'ny webmaster ianao.
Omeo anarana ny sivana vaovao ary fidio izay karazana tianao. Amin'ity tranga ity dia misafidy ny hanaisotra ny fifamoivoizana amin'ny adiresy IP izay mitovy.
Manaraka ny adiresy IP amin'ny tranonkalanao manaraka. Ny "adiresy IP" ataoko dia iray amin'ireo fomba tsotra indrindra ahafahanao mahafantatra ny adiresy IP an'ny tranonkala.
Na inona na inona adiresy IP dia averina ilay fitaovana dia afeno ao amin'ny sivana amin'ny Google Analytics izany.
Vonjeo ny sivana vaovao
Rehefa vita izany dia tsy hiseho amin'ny tatitra Google Analytics ny fifamoivoizana rehetra avy amin'io adiresy IP manokana io. Raha manao asa be dia be avy amin'ny adiresy IP hafa ianao, dia mety ho tsara ihany koa ny mamorona filtre vaovao ho azy ireo. Toy izany ihany koa ho an'ireo mpandraharaha matihanina izay manao asa be dia be ao amin'ny tranokalanao.